Alemayo Atomsa Dhugaaf dhaabbachun isaa Wareegama lubu Kafalchisee.
Alemayo Atomsa dhugaaf falmachuu isaaf akka wareegamee kan haaluu yoo jiratee wara ajjesee fi ajjesisee qoofadha.
Alemayo Atomsa Oromiyaan Oromoon bulu qabdi malee TPLF jala buluu hin qabdu jeechun Mormii siirna wayyanee irratti qabu kan ibsacha ture wagoota 15 dura yeroo gutuuman guutuutti Oromiyaan Tesfaye Ximoo fi Melese Zenawin waan hunda murtesa turte kase ta’uun beekmadha. Falmii wayyanee waliin goodhe yeroo tokko Melese Zenawi waliin afaan Basani arabsoo gadhee akka wal abaran walga’ii sana irra wari jiran ragaa ba’uu. Obbo Alemayo Atomsa Oromiyaan ofiin of bulchuu qabdi, TPLF Oromiyaa akka bulchuu wal galtee hin qabnu, ijoole Oromoo qulqulun Oromiyaa bulchuu utuu qaban, namoon Afaan Oromoo dubatan murtee TPLF oromoo irratti dabarsuu hin qaban jeechun falmii inni kaseenf Melese Zenawi "Enyutu Oromiyaa akka bulchuu barbaadee jeedhe, walala akka kee faatu Bulcha ? jeenan, Oromiyaa Bulchuun mirga kooti fi dirqama kooti, Barumsa fi beekumsa yoo ta'e hundi keenya waluma qixee kuta 12 xumure Digrii soba Open university yoo ta’ee malee jeechun Oganoota TPLF hunda salfachisun isaa ilikan TPLF ittin cininsise. Alemayon akka dhabamsifamu guyyaa sana kasee murta’ee. Ittigaafatama Fayinansi Oromiyaa kan ture Alemayon kan ajjeefame Alemayo Atomsa Ajjeesuf kiiyyo xiiyefame maqaan wal da’ee isaa ajjeesan kan jeedhan ilee jiru.
Melese Zenawi Muktar Kadir akka filatamuu dirqama inni kene didun OPDOn Alemayo Atomsa filachuun ammoo xifuma Alemayo wayyanen wa'ee ajjeesisuu isaa iranfatamee TPLFn yaadachisee. Alemayon ammoo akkuma Ango qabateen Malamaltuma fi Gurgurta lafa Oromiyaa falmachun isaa diina itti baa'isee. Namoon Heeddun kan jeecha jiran fi itti amanan garuu "Melese Zenawi akka filatamu kan barbaade ture Muktar Kadir yammu ta'uu dabbaleen OPDO falmatan Alemayo Atomsa Filachun isaan gartun TPLF fi deggertoota isaan Abbootiin qabeenya lafa Oromiyaa seeran ala qabatan waan hin gaamachifnef Alemayo Atomsa summin ajjeesu keessa harka qabu " jeedhame shakama. Ogganoota TPLF waruma Ola'anatu akka inni dhabamsiifamu godhe jeecha jiru.
TPLF ykn OPDO ta’ee Obbo Alemayo Atomsa dhuggaf falmachuu isaan summin ajjeefamuun isaa siiridha. Media Deggertoota wayyane Tayfoyidn du’ee jeechun isaan garuu heeddu nama gadisisa. OPDO waggoota 4 guutuu nama summii isaa naychisee saxiiluu dhisun isaa OPDOn dhuguma dadhaboo ta’uu isaani argisisa jeedhu warii gaddaa isaan ilee bo’aan baafachuu dadhaban. Alemayo Atomsa Enyuutu ajjeese ykn ajjeesisee? Deebi argachuu qaba. Alemayo Atomsa Malamaltuma keessa nama qulqulu ta’uu isaa Melese Zenawi yeroo lubun jiru yeroo heeddu yamuu raggaa ba’uu “Waan itti walanamu ilee kan hin qabnee, samiicha keessaa kan hin seenin nama siyyaasaa dhugaa Alemayo Atomsa faa qabna” jeechun waltajii irratti dubachun isaa ifaa. Itti dabalun yeroo Alemayo Atomsa dhukbsatee angoon gadii dhisaa jeedhe Melese Zenawi gaafatee” Dhukubsta kee woyya warii kan hundi ishee samtu qoofadha, jara kanatti angoo yoo laane boruma lafaa Oromiyaa gurguran fixuu utuuma dhukbsatuu hojeechu qabada” jeechun isaa ni yadatama. Alemayon akka du’uu siiriti beeka ture walga’ii hojeetota mootummaa irratti “Namoon ni du’uu biyyi garuu ni jirata “jeedhe kana jeechun isaa qabsoo biyya keenyaf goonu itti fufa jeedhe dhamatee ture.
Warii Alemayo Atomsa Ajjeessan fi ajjeesisan lafa irrattis ta’ee waqaa irratti murtiif dhiyachun isaan hin oluu. Guyyaa tokko akka isaan qooratamani seeratti dhiyatan abdii qabna. Gummaan Alemayo Atomsa Bilisummaa Oromoon ni ba'aa!!! Akka Obbo Alemayo Atomsa diina dura dhabatan falmachuun dirqama qabsa'oota Oromoo OPDO keessa jiran ta'uu qaba.
Gummin Paarlamaa Oromoo Obbo Alemayo Atomsa lubun isaa bakka dhugaa akka booqotuu fi maatii isaa fi jaaloota isaaf ammoo jaajjabina haawwaaf.